Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 53aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 53aad
Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 53aad
Markii uu baaburka ku soo xareeyey garashka ayaa uu soo tiigsady halkii uu ku sii balansaday Saalaxey markii uu u yimid ayaa uu ku yiri.
Haye war jaceylka kuguma ogeyn weli ma I sugeysay
Waad soo daahday maxaa jira xataa cashadii aan so cunay dhaxanta ayaa igala baxday in aan casho kale aan doonto ayaa qasab ah.
Hadalkayga ayaa casho kuu ah iska dhaaf haye maxaad I weydiineysaa
Waxaan ku weydiinayo waad ogtahayee yey tahay gabadhaan mar kaliya ku badashay
Ma aaminsan tahay in la ii badali karo
Walaahi Maya laakiin hadalkii aad ii sheegtay maa been baa
Maya wax been ah ma jiro ee gabadha ma taqaan cida ay tahay
Canab saaxiibteed sow maaha
Haa dhinaca kalana waa Yaasiinkii doqonka ahaa walaashiis bal ka waran sida cajiibka ah ee ay wadadeyda ugu timid.
Saalaxey markii uu warkaa maqlay ayuu istaagay oo uu yiri
Ii sheeg Qadar maxaad gabarta ka damacsan tahay
Qaaladkii walaalkeed ayay gudeysaa maxaa kale
Waa ku baryaa wax xun ha ku fikirin in aad gabadha ku sameyso ogow adba gabdho way kula dhasheen.
Iyada walaalkeed muxuu walaashey ku sameeyey muxuu ugu fikiri waayey in ay gabar la dhalatay oo waliba dhacdhac ah.
Yaasiin muxuu walaashaa ku sameeyey ii sheeg waa uu jeclaaday taasi miyaa dembi ah mise ceeb ah kadib wuu ogaa in aadan u ogolaaneynin waana mehersaday iminka waa kaa u dhaqmeyso ma dhibkeeda ayaa kuu yimaada.
Maba ii imaan karo
I maqal Qadar fal xun oo sharafkaaga iyo kan reerkaaga wax u dhimayo ha ku kicin magacana sidiisaba maalin ayaa uu ku raacaa maanta Yaasiin wax kasta xagaaga ha ka ahaado waa nin rag ah oo aan sumacadiisa dhaawicin ee adiga sumcadada ka fikir.
Qadar inta uu qoslay ayaa uu yiri.
Sow ma ogid nin aan aarsan uurka hooyadii ayaa uu ku jiraa miyeysan aheyn in aan aarsado.
Maxaa lagaa haleeyey oo aad ku aarsaneysaa Falis iyada si xad dhaaf u jecleyd Yaasiin isagana wax xun kuma sameyn waa uu guursaday taa haddii aad ka aar gudaneyso samee guur iyo meher xalaal ah ceeb maaha laakiin ha ku fikirin talaab xun in aad qaado waana kaa tagay.
Saalax halkii ayaa uu kaga dhaqaaqay Qadar isagoo waliba u yeerayo ayaa uu ka dhaqaajiyey Qadar dhamaan hadalka loo sheegay ma aheyn mid laabtiisa u duleyshay illaah ayaan garan waxa uu ku fikirayo waxaase jirtay inuusan xumaan waxaan aheyn uusan ku fikireynin Samiira miskiin nasiibka ha saacido.
Falis iyo Yaasiin buuqooda ayaa batay waxaana loo soo sheegay in uu qayilaata bartay oo uu waliba hablo la geerasho waxaana arrintaan Falis u soo sheegay Nuuradiin oo aad ugu xumaaday habdhaqanka cusub ee uu la soo baxay Saaxiibkii Yaasiin.
Yaasiin waxa uu la qabsaday asxaab cusub oo hablo u badan kuwaa oo shiishada iyo qaadka ku geerisha hablahaaan ayaa uu Yaasiin ku bartay carwadiisa oo ay ka adeegan jireen sidiina asxaab ku noqdeen jaadka si tartiib tartiib ayaa loo baray waxa uuna maanta taagan yahay inuu isaga keeno oo asxaabta oo dhan qayilaadooda uu bixiyo waxa uuna caadeystay inuu xilli dambana yimaado guriga oo uu gabay xaqii lagu lahaa Falis waxa kaliya ee ay ku doodeysay waxa uu ahaa inuusan carwada tagin waqtigii la filaayey waxaana jirtay in dhowr jeer uu Aabo Cali soo waca uu weydiiyey halka uu jira kadib markii uu arkay Carwada oo xeran Falis waa ay ku daashay wax u sheegid iyo talo siin balse Yaasiin waxa uu ahaa nin bad kale oo uu ku riyaaqsan yahay ku jira.
Mursal wax badan ayaa uu isku dayey in uu u dhawaado xaaskiisa Yaasmiin hadana waa uu kari waayey inuu qalbigiisa u furo waxaana mooday inuu weli ilaawi kari la’ yahay gabadhii aragtidii ugu horeysay qalbigiisa degtay ee Falis Warsame aheyd oo iminka xaas ah sida kalana ah xaaskiisa gabar ay habro wadaag yihiin.
Qadar la haasaawidiisa Samiira ayaa uu ku jiray waxayna kulmi jireen 2 habeen usbuucii oo ah xilliyada ay fasaxa ka tahay waxbarashada inkastoo kulankooda uu mar kasta uu ka dhacaayey guriga oo uusan heysan fursad uu banaanka kula kulmo hadana waxaad mooday nin samirka isu sheegayo isaga oo kalsoonida reerka inta badan raadinaayey si uu habeen banaanka ugu kaxeeyo haddana waxaad moodaa in ay waqtigii uu filaayey mid ka badan ay ku qaadaneyso.
Saalax tan iyo habeenkii uu Qadar ogaaday sirtiisa waa uu ka xanaaqsanaa wax uu sameyn karay ma jirin ileyn gabadha ma aqoon haddii u aqbaar tabin lahaa si kasta fariinta ha ku gaarsiiyee.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo la kulmay qoyska gabadhii Ardayada aheyd ee Muqdisho lagu dilay
Next articleFaahfaahin ka soo baxaysa askari lagu diley saaka magaalada Muqdisho
C/fataax Geesey oo iska casilay xilkii Wasiirka Howlaha Guud ee Xukuumadda Soomaaliya